January 2018 | Save A tareenka
Italy, mid ka mid ah meelaha fasaxa ugu caansan Yurub, waxaa oo dhan ayaa. A taariikhda dhaqanka hodanka ah, hotels raaxo, cunnada adduunka caan, naqshadaha, goobaha quruxda dabiiciga ah ... ka dibna waxaa jira shopping! U safarka Italy tareen waa waayo-aragnimo breathtaking. Waxaad ka heli in ay ku raaxaystaan ​​oo dhan muuqaal qurux badan…
Talooyin Top Si Socda Europe By tareenka In 2020
Socdaalka Europe by rail waa caado dheer in aan la tegey si dhaqso ah – Tareenadu waa dhaqsiyaha badan, Jidka ugu soo kobcaya, saaxiibtinimo iyo ugu hufan ee meeshaad u dhaqaaqin. Inkastoo nidaamka tigidhada tareenka xanuunka qaadataa soo baxay abaabulka…
gaadiidka Tareenka waa habka ugu deegaanka-friendly in ay u safraan. saamayn lagu koriyo ah ee gaaska ah halkii kiiloomitir gaadiidka tareenka waa 80% ka yar baabuurta. Wadamada qaarkood, Ka yar 3% gaadiidka oo dhan gaaska ka tareenada iman. The only methods more environmentally friendly…
Safrida dal ilaa dal, ama magaalo ilaa magaalo, waa waayo-aragnimo dhab ah la yaab leh iyo kuwa saaran tareen waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee ay tan u sameeyaan. tikidhada tareenka Yurub waxaa inta badan ku salaysan masaafada u safray, si kastaba ha ahaatee, shirkado badan oo tareenka Yurub ayaa haatan…
maaliyadda tareenka, safarka tareenka France, safarka tareenka Germany, safarka tareenka Italy, Talooyin safarka tareenka
sodcaalladoodii oo tareen ee Italy bixiyaan ma aha oo kaliya raaxo, laakiin qaar ka mid ah views cajiib ah. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan qaadashada tareenka ee Italy waa fursad ay ku eegaan muuqaal qurux badan sida aad u safri ka mid ah meel kale. Qaybo ka mid ah Italy,…
safarka tareenka Italy, Talooyin safarka tareenka